11 Caruur Ah Iyo Macalinkoodii Oo Ku Dhintay Duqeyn Lala Beegsaday - Awdinle Online
Ugu yaraan 12 qof oo rayid ah ayaa lagu dilay duqeyn dhanka cirka ah oo lala beegsaday Dugsi lagu barto diinta oo kuyaala gobolka Takhar ee waqooyiga Afghanistan, sida ay sheegeen saraakiisha deegaanka.
Waxay sheegeen in duqeyntu ay ka dhacday dugsi Qura’aan oo ku yaalla tuulada Hazara Qurluq ayna ku dhinteen 11 caruur ah iyo macalinkoodii.
Dowladda Afghanistan sheegtay inay ku dishay aaga duqeyntu ka dhacday 12 dagaalyahan oo ka tirsan Taalibaan.
Duqeyntan ayaa timid kadib markii in ka badan 30 xubnood oo ka tirsan ciidamada amniga lagu dilay weerar gaadmo ah oo ay Taalibaan ku qaadeen gobolka.
Saraakiisha gudaha ayaa sheegaya in 14 kale ay ku dhaawacmeen duqeynta dhanka cirka ah ee halkaa ka dhacday Arbacadii a. Imaamka masaajid ku yaalla Tuuladaas oo lagu magacaabo Cabdul Awal, oo kamid ahaa dhaawacyada lana dhigay isbitaal, ayaa BBC-da u sheegay in isaga iyo caruur oo kaliya ay kujireen masjidka xiligii duqeynta.
Dhaqaatiirta isbitaal ku dhow halka ay duqeynta cirka ka dhacday ee caasimada gobolka Taloqan ayaa sheegay in dhibanayaasha ugu badan ee la keenay ay yihiin caruur, Maxammad Jawaad Xejri oo ah afhayeenka gudoomiyaha gobolka ayaa sidoo kale sheegay in duqeynta lagu laayay caruur.
Balse saraakiisha dowladda Afghanistan ayaa beeniyay wararka sheegaya in carruur la dilay, iyagoo sheegay in kaliya ay dhinteen dagaalyahanno Taalibaan ka tirsan.
Hase yeeshee Wasaaradda gaashaandhigga ma aysan diidin in duqeynta lagu garaacay iskuul. Afhayeen u hadlay Wasaaradda ayaa sheegay in koox baaris ku samaeeysa loo xilsaaray inay qiimeeyaan eedeymaha la xiriira qasaaraha rayidka ee ka dhashay weerarkan.
Previous articleGalmudug oo gudbisay Xubnaha ku matalaya Guddiga doorashooyinka
Next articleCiidamada Dowladda oo weeraray Saldhig ay ku sugnaayeen Al-Shabaab